Isibuyekezo se Silver Sands Casino se selula naku inthanethi eNingizimu Afrika
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-silver sands casino
Isibuyekezo se-Silver Sands Casino
Ibhonasi Lokukwamukela:R300 Ama-No Deposit Bonus
Isungulwe ngonyaka we-2003, i-Silver Sands Casino isinikele ngesevisi kubathandi bayo cishe iminyaka engamashumi amabili. Emakethe lapho izinkampane ezisungulwa khona ngaso sonke isikhathi, lokhu kuyimpumelelo enkulu.
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-Real Time Gaming – eyaziwa njengomunye wabahlinzeki besofthiwe yekhasino ye-inthanethi enekhwalithi ephezulu kakhulu – i-Silver Sands Casino izakhele idumela abaningi kule mboni abangakwazi ukuncintisana nalo. Ngokugxila ikakhulukazi emakethini yaseNingizimu Afrika, i-Silver Sands Casino ikhombise ukuba yintandokazi kubalandeli abavela e-SA iminyaka eminingi. Yize amakhasino e-inthanethi amaningi enakekela imakethe yaseNingizimu Afrika, akuvamile ukubona ikhasino isebenzela le makethe. Lokhu kuza nezinzuzo eziningana, esizozibheka kulesi sibuyekezo.
Uma ufisa ukudlala kwenye yekhasino ye-inthanethi yaseNingizimu Afrika eyaziwa kahle emakethe kodwa ungaqiniseki uma ufuna ukuqala okwamanje, qhubeka ufunda futhi sizokunikeza yonke imininingwane.
Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Silver Sands Casino
Njengoba amakhasino e-inthanethi amaningi sengene embonini, amakhasino aseqalile ukuncintisana ngokuzama ukuheha abasebenzisi abasha kumapulatifomu awo. Okuhle kubadlali baseNingizimu Afrika, lokhu akuhlukile uma kukhulunywa nge-Silver Sands Casino, enephromoshini yokubhalisa enikeza bonke abasebenzisi abasha kupulatifomu u-R8,888.
Ukuthola le bhonasi emahhala ngokuphelele, okumele ukwenze wukubhalisa i-akhawunti usebenzisa amakhuphoni asekhasini lika-R8,888, wenze idiphozithi, bese uqala ukudlala. Ukuze ufanele lokhu, mane udiphozithe imali efinyelela ku-R1,888 bese uthola ibhonasi ka-100% efinyelela ku-R1,888. Kuzosebenza ibhonasi yesibili efinyelela ku-75%, kudiphozithi efinyelela ku-R4,000. Kudiphozithi yakho yesithathu, uzonikezwa ibhonasi ka-50% kumadiphozithi afinyelela u-R8,000. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi uhlangabezana nazo zonke izimo nezidingo ezahlukahlukene zokubheja ukuze ukhiphe imali ngaphambi kokukhipha imali ukuze uthole okuningi ohlelweni lwamabhonasi.
Ibhonasi Yediphozithi Yokuqala Diphozitha u-R1,888 - Thola u-R1,888 Mahhala - (SEBENZISA IKHODI: K3XTG)
Ibhonasi Yediphozithi Yesibili Diphozitha u-R4,000 - Thola u-R3,000 Mahhala - (SEBENZISA IKHODI: TD8FH)
Ibhonasi Yediphozithi Yesithathu Diphozitha u-R8,000 - Thola u-R4,000 Mahhala - (SEBENZISA IKHODI: WWYMX)
Amakhodi Amabhonasi Ediphozithi Engekho e-Silver Sands Casino
.INgaphezulu kwebhonasi yokukwamukela ekuphromoshini, abadlali abasha kuplatifomu ye-Silver Sands Casino bazokwazi futhi ukusebenzisa ibhonasi yamahhala yediphozithi engekho ebiza u-R300. Ukuze uthole lokhu, okumele okwenze ukusebenzisa ikhodi yekhuphoni ethi ‘PLAY 300’ lapho ubhalisa.
AMANYE AMAPHROMOSHINI AKHETHEKILE ANIKEZWA YI-SILVER SANDS CASINO
Amaphromoshini namabhonasi anikezwayo awemi kumabhonasi okukwamukela. I-Silver Sands Casino inohlu lwama phromoshini angeziwe lwabasebenzisi bepulatifomu.
Kunamaphromoshini abasebenzisi bepulatifomu aningana aqhubekayo asebenza ngezikhathi ezithize.
Cashback Mondays: Cashback Mondays: Njalo ngoMsombuluko abasebenzisi banikezwa ibhonasi yemali ebuyiselwayo ka-40% kumadiphozithi afinyelela ku-R1,000
Weekly Offers: Weekly Offers: Ibhonasi yamasonto onke ithunyelwa ngqo ku-imeyili yakho njalo ngoLwesihlanu, ebandakanya amabhonasi amancane namakhulu kanye nemiklomelo.
'Crazy Wednesday': Njalo ngoLwesithathu ungasebenzisa iphromoshini ye-'Crazy Wednesday', ekunikeza amakhuphoni amabili lapho udiphozitha imali.
Slots Tournaments: Kukhona futhi ama-Super Slots Tournaments, akuvumela ukuthi udlale nabanye abadlali be-Silver Sands Casino - ngemiklomelo eya kubasebenzisi abashaya inani elikhulu lamaphoyinti.
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Silver Sands Casino ✍
I-Silver Sands iyikhasino egqoka ubuzwe bayo beNingizimu Afrika emkhonweni wayo. Kepha ngaphambi kokuthi ugxile ekudlaleni omunye wemidlalo eminingi enayo, uzodinga i-akhawunti.
Ngokujabulisayo, ukungena ngemvume kulula kakhulu. Ukungena ngemvume, mane uye ekhasini lasekhaya bese uchofoza inkinobho enkulu ethi ‘log in’ ekhoneni eliphezulu lekhasi kwesokudla. Uma usungenile ngemvume, uzohanjiswa ekhasini lasekhaya le-akhawunti yakho, elizokunikeza imvume yokuvula iwebhusayithi ngokugcwele.
Uma usadinga ukubhalisa i-akhawunti, lokhu kuyinqubo esheshayo futhi engenabuhlungu. Ukuze uqalise, mane uchofoze inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka ethi ‘sign up’ etholakala eceleni kwenkinobho ethi ‘log in’ ekhoneni eliphezulu kwesokudla. Lokhu kuzoqala inqubo yokuvula i-akhawunti lapho okuzodingeka ukuthi uqedele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Uma usuchofoze inkinobho ye ‘sign up’, iwindi elincane lizovela likucele ukuthi ufake imininingwane ye-akhawunti yakho.
Faka igama lakho, igama lomsebenzisi, iphasiwedi, nekheli le-imeyili bese uchofoza ‘next ‘.
Kuzodingeka ukuthi ufake imininingwane yakho eyengeziwe ebandakanya ikheli lakho lasekhaya, inombolo yakho yocingo, neminye imininingwane efanele njengosuku lwakho lokuzalwa. Uma sekulungile, chofoza submit.
Uma imininingwane yakho ifakiwe kahle, uzothunyelwa i-imeyili yokuqinisekisa, ozodinga ukuyivula ukuze uqinisekise i-imeyili yakho.
Uma ukuqinisekisa kulungile, i-akhawunti yakho manje seyakhiwe ngokuphelele. Okumele ukwenze manje ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho ukuze uqale ukudlala.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Silver Sands Casino
Izinhlobonhlobo Eziningi Zama-Slot
Ama-Slota angesinye sezigaba zomdlalo ezithandwa kakhulu kupulatifomu ye-Silver Sands, futhi abathandi be-slot ngeke badumale uma kuziwa ohlwini lemidlalo olukhona. Ngamakhulu ama-six-reel, five-reel, three-reel nama-progressive slot ahlukahlukene atholakala kusayithi yokudlala ngokushesha, i-Silver Sands Casino izokugcina ubuyela njalo.
Imidlalo Yakho Yasetafuleni Yakudala
Ngenxa yesofthiwe enikezwe ngabakhiqizi besofthiwe yekhasino ye-inthanethi abahamba phambili embonini, imidlalo yasetafuleni imelwe kahle kupulatifomu ye-Silver Sands Casino. Ngezinhlobo ezahlukahlukene zemidlalo yamakhadi, i-roulette, ne-poker yevidiyo, kunokuningi lapha okuzokugcina umatasa.
Eminye Imidlalo Enikezwayo
Ngaphezu kwemidlalo yasetafuleni yakudala nemishini yokugembula i-Silver Sands Casino nayo inawo ama-progressive jackpot nemidlalo ekhethekile – ibandakanya ama-scratch card, imidlalo yebhodi, nemidlalo yokudubula – elungele ukudlala ngokushesha. Lokhu kunikeza i-Silver Sands Casino ilabhulali yemidlalo ehlukahlukene kakhulu.
Silver Sands Mobile Casino: I-Silver Sands Casino Iqhathaniseka Kanjani Kuselula?
Nakuba iyodwa phakathi kwamanye amakhasino atholakalayo, i-Silver Sands Casino yenza umsebenzi omuhle wokuziphatha. Abadlali baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi, bazozizwa besekhaya kupulatifomu, njengoba kusobala ukuthi iyikhasino ye-inthanethi eklanywe izidingo zabo zisengqondweni. Ngamabhonasi amahle atholakalayo neminye yemidlalo esezingeni eliphezulu kakhulu etholakala ngokudlala ngokushesha, i-Silver Sands Casino inokuningi enakho. Ngosizo lwamakhasimende olunobungane noluphendulayo 24/7, kuyacaca ukuthi i-Silver Sands Casino ikuthathela phezulu ukwaneliseka kwamakhasimende.
I-app yeselula iyatholakala kubo bonke abasebenzisi bepulatifomu ukudawuniloda, futhi okwamanje isebenza kuwo wonke amadivayisi e-iOS ne-Android. Inguqulo yeselula itholakala nganoma iyiphi idivayisi yeselula ofuna ukuyisebenzisa ngesiphequluli sewebhu sayo. Lokhu kusho ukuthi asikho isidingo sokudawuniloda i-app ezimele.
Ngingayidawuniloda Yini i-Silver Sands Casino Kuselula Yami?
Uma ufuna ukudawuniloda i-app ye-Silver Sands Casino ngqo kudeskithophu yakho, mane uqonde ekhasini lasekhaya bese uchofoza ‘download casino’. Lokhu kukuyisa ekudawunilodeni kwesoftware, okukuvumela ukuthi ufake isofthiwe ngqo kudeskithophu yakho. Uma isidawunilodiwe, ungadlala kudeskithophu yakho ngaphandle kwesidingo sesiphequluli sewebhu, okunezinzuzo zokuphepha eziningana.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Silver Sands Casino
Indlela Yokubhenka Khipha Imali Ijubane Lokukhipha Imali
Visa/MasterCard Cha X
SA Bank Transfer Yebo
UpayCard Yebo Ngokushesha
EasyEFT Yebo Amahora angu 48-72
Skrill Yebo Amahora angu 48-72
Neteller Yebo Amahora angu 48-72
EcoPayz Yebo Amahora angu 48-72
Diners Club Yebo Izinsuku ezi-3
American Express Yebo Izinsuku 1-2
Izindlela Ezivunyelwe Zokudiphozitha Imali e-Silver Sands Casino
Diners Club Yebo
American Express Yebo
Isungulwe: 2003 Isungulwe: 2003 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: 0800-980-752
Umphathi ngu: Portvale Coporation Limited I-imeyili: [email protected]
Ilayisense ngeyase: Kahnawake Ingxoxo Ebukhoma: Cha
Uhlobo Ongaludawuniloda: Yebo Usizo lwe-24/7/365: Yebo
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha ukuvakashela isayithi